Su'aalaha la isweydiiyo - Dongguan Pretty Shiny Gifts Co., Ltd.
Waan ku cusbaa hadiyadaha caadooyinka ah. Xagee ka bilaabayaa?
Adiga waxaa laga yaabaa inay ku bilowdo soo gudbinta codsi xigasho bilaash ah websaydkeena, ama si toos ah noogu soo dir emayl oo nala soo xiriir maaddada, cabbirka, tirada iyo fikradaha naqshadeynta ee alaabtaada la diyaariyey.
Waa maxay amarkaaga ugu yar?
Guud ahaan, mid ayaa ugu yar laakiin qaali ah, marka caadiyan dadku waxay la socdaan 100pcs naqshad kasta.
Qiimaha gogosha iyo MOQ waxay dabacsan yihiin shay kala duwan.
Waa imisa alaabtaadu?
Waxaan inta badan bixinnaa hadiyado & lacag -bixinno si gaar ah loo sameeyay, waxaa jira naqshado furan oo yar oo laga kala dooran karo oo aan lahayn kayd ama alaabo la maamulo oo la iibiyo. Qiimayaashu way kala duwanaan doonaan naqshadeynta, cabbirka, midabka, dhammaadka iyo tirada, fadlan xor u noqo inaad nala soo xiriirto sales@sjjgifts.com; sjjgifts@gmail.com.
Sideen u dalban karaa dalabkayga?
Markaad bixiso oggolaansho qoraal ah ee naqshaddaada waxaad ku dalban kartaa dalabkaaga emayl.
Miyaan awoodi doonaa inaan arko sida hadiyadayda la habeeyey u ekaan doonto wax -soo -saarka ka hor?
Haa. Waxaan ku siin doonaa farshaxan dijitaal ah oo midabkiisu buuxa yahay oggolaanshahaaga. Jees-jeeskan waxaa ka mid noqon doona fanaaniinta oo ka tarjumeysa waxa alaabtaada la amray ay u ekaan karaan iyo sidoo kale burburka midabada loo adeegsaday naqshaddaada.
Mudo intee leeg ayay qaadan doontaa in la helo alaabtayda?
Laga bilaabo wakhtiga oggolaanshaha farshaxanka, waxaad filan kartaa inaad ku aragtid alaabtaada hadiyadeed 14-21 maalmood gudahood.
Waa maxay habka dhoofinta ee aad isticmaasho?
Xamuulka Hawada/Badda, FedEx/UPS/DHL